I-Bird's Nest - Cozy Farm Getaway w/ Tour & Tasting - I-Airbnb
I-Bird's Nest - Cozy Farm Getaway w/ Tour & Tasting
I-Birds Nest iyisitediyo esingaphezulu kwegalaji ebuka isigodi nepulazi lethu esisebenzayo. Akhiwe ekugcineni komgwaqo othulile othulile, amahektha ethu angu-36 ahlinzeka ngokukhululeka komzimba nomphefumulo ngemizila namavistas, futhi abandakanya ingqondo kwezolimo ezisimeme ngokuvakasha (inani elingu-$25, kuhlanganisa. w/stays of 2+ nights) .
Ukufinyelela kalula kukho kokubili i-Grand Rapids kanye nezindawo zokudlela ezitholakala epulazini ukuya etafuleni logu, eziningi zazo esizihlinzeka ngemifino emisha unyaka wonke.
Ipulazi elisebenzayo eselineminyaka engu-114 emndenini wethu lisendaweni eseningizimu yeChibi Lodaka. Sicela uqaphele ukuthi leli ipulazi, futhi sinawo nomthombo wamanzi ethu okuphuza. Ngeke inuke njenge-chlorine (njengamanzi kamasipala), kodwa ihlolwa njalo futhi iphephe ngokuphelele. Sinesithambisa samanzi esiyindlu yonke, isisefo eshaweni, namanzi e-osmosis ahlehlisayo ekhishini.
I-The Bird's Nest inombhede ongu-queen ongu-1 kanye ne-futon yosayizi ogcwele ongu-1. Ingahlalisa izivakashi ezingafika kwezi-4, kodwa ithokomele kakhulu kwabangu-2.
Sifake ohlwini njengezingazifanele izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12 (iwindi leminyaka le-Airbnb lale nketho) ngenxa yezitebhisi ezivuliwe ohlwini (bona izithombe ukuze uthole inkomba). Sicela usazise uma uhlela ukuletha izingane ezincane, futhi uthathe noma yiziphi izinyathelo zokuphepha onomuzwa wokuthi ziyadingeka.
I-HDTV engu-31" ene- Fire TV
4.96 · 141 okushiwo abanye
I-Hudsonville itholakala phakathi kwe-Holland ne-Grand Rapids. Ipulazi lethu lingaphandle kwe-Hudsonville, emgwaqweni owubhuqu othule.
We have a small farm in west Michigan, growing hydroponic lettuce, herbs, and micros. We grow a variety of other things, like arctic kiwi, elderflowers, hazelnuts, and ginger. We also make small batch cordials (flavored syrups) from the elderflowers, ginger, chamomile, and other things we grow, which we sell and use to make sodas.
We are laid-back travelers, and enjoy getting off the beaten track to meet people and enjoy local food.
We have a small farm in west Michigan, growing hydroponic lettuce, herbs, and micros. We grow a variety of other things, like arctic kiwi, elderflowers, hazelnuts, and ginger. We…
Omunye wethu uvamise ukuzungeza ipulazi futhi siyakujabulela ukunikeza izinkomba nezeluleko.